Meen Boriboune Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Meen Boriboune
Delivra, mutengi wedu email kushambadzira mutsigiri, yakagadzira whitepaper inoratidza kukosha kwekubaya sezvo uchigona kuve mutsauko pakati pekugadzira kutengesa. Iko Kukosha kweClip whitepaper inokurukura chikonzero chiri kumashure kwekudzvanya kwese, matekiniki ekuvandudza mitengo yekudzvanya, uye zvimwe zviitiko zvehupenyu kuratidza kuti kunzwisisa kukosha kwekubaya kuchabatsira sei kambani yako yekutengesa email. Kuwedzera kudzvanya mitengo mune yako email kushambadzira ndeye
Mifananidzo mumaemail inoshanda zvechokwadi here?
Chitatu, October 3, 2012 Muvhuro, June 8, 2015 Meen Boriboune
Une masekonzi makumi matatu ekutora pfungwa dzevaverengi vako kana vangodzvanya paemail yako. Iri zvirokwazvo iri hwindo diki. Kana iwe wakaita seni, saka iwe ungangofunga kuti kupopota kune njodzi kuita nekushambadzira kweemail, asi iwe unoda kukwezva vanogamuchira. Saka, iwe unoitei? Nekudaro, mushure mekupfuura neyedu yeemail kushambadzira mutsigiri weyambiro, ichi chingave chishandiso chakanakisa chevatengesi veemail kana chikabatanidzwa zvinobudirira. Kwete chete
Chii Chako Zvemagariro Media Kuratidzira?
Muvhuro, September 17, 2012 Muvhuro, September 17, 2012 Meen Boriboune
"Haumbowana mukana wechipiri wekutanga kuratidza," purofesa wangu webhizinesi, Marvin Recht, anogara achiyeuchidza vadzidzi vake. Usaite zvikanganiso zvakaitwa nevakawanda pamberi pako. Munyika yanhasi, yekutanga pfungwa pfungwa ichine chokwadi. Zvisinei, vatengi vemadhijitari uye vezvenhau vanobvumidza isu kuti tibatane munzira dzatisingazombove nadzo munguva yakapfuura. Uye iko kufunga kwekuti iwe unosiya pane yako Facebook peji, Twitter kuyerera, kana webhusaiti inogona kuve nezvimwe